कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दैछ, मिलेर सामना गरौँ : डा. रमेश सापकोटा « Lokpath
डा. रमेश सापकोटा । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह स्थिती सिर्जना गर्दैछ । छिमेकी मुलुकमा नियन्त्रणबाहिर पुगेको कोरोनाको कहरका कारण यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा २ लाख ८९ हजार ७ सय ८७ जना संक्रमित भएका छन् । २ लाख ७६ हजार ९३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ३ हजार १ सय १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
यस्तोमा कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमबाट बच्न सबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसैबीच डाक्टर रमेश सापकोटाले दिएको केहि महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि रोगको विश्वव्यापी महामारी भाइरस पूर्ण वा आशिंक नियन्त्रणमा आएपछि सो को संक्रमण दरमा पुन वृद्धि हुनु वा पहिलेकै अवस्थातिर फर्कनुलाई ‘दोस्रो लहर’ भनिन्छ।
अहिले संक्रमण गर्ने भाइरसहरु पूर्ण रुपमा पहिलेको भन्दा फरक छन् भन्ने त होइन तर विश्वको केही ठाउँमा भाइरसमाः ‘Mutation’ भई नयाँ स्वरुप विकसित भएको र सो को संक्रमण अझै भयानक रहेको यथार्थ चाहिँ चिन्ताको विषय हो।
कोरोनाको जुन स्वरुपविरुद्ध भ्याक्सिन विकसित भएको हो । सो भ्याक्सिनको सम्पूर्ण डोज लगाइसकेपछि, कोरोनाबाट निकै हदसम्म सुरक्षित रहन त सकिन्छ तर पूर्ण रुपमा भने होइन ।
यस बाहेक ‘Mutation’ भई नयाँ विकसित भएको कोभिड भाइरसले रोग लगाउन सक्ने सम्भावना त जीवित नै रहन्छ । त्यसैले भ्याक्सिन लगायतका वान लगायतका जसले पनि न्यूनतम स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु अनिवार्य छ ।
कोभिड पोजेटिभ देखिएका सबै बिरामी अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्छ भन्ने छैन र यो सम्भव पनि हुन्न। लक्षण सामान्य हुने र जोखिमको परिधिबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरू घरमै बस्न सक्नुहुन्छ । तर, उहाँहरूले निश्चित नियमहरू भने अवश्य पनि पालना गर्नुपर्छ। संक्रमित बिरामीले छुट्टै कोठाको प्रयोग गर्ने र निजले प्रयोग गर्ने सामानहरू नितान्त व्यक्तिगत हुनुपर्छ। सम्भव भए ट्वाइलेट, बाथरुम पनि अलग्गै प्रयोग गर्ने र सो गर्न सम्भव नभए हरेक प्रयोगपछि पानीले राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ।
मास्क र स्यानीटाइजर को प्रयोगमा कन्जुस्याई गर्न मिल्दैन । परिवारका अरु सदस्यले बिरामीबाट कम्तिमा दुई मिटर दुरी कायम गर्नु अनिवार्य छ। नियमित रुपमा ‘ Oxymeter ‘ को सहयोगमा ‘Oxygen’ को मात्र जाँच गरिराख्ने र ९० भन्दा कम (सामान्य व्यक्तिमा) वा ८५ भन्दा कम (दम, COPD बिरामीमा) भएमा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ । साथै, श्वास फेर्न गाह्रो भएमा डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ । अझै महत्वपूर्ण कुरा के छ भने आफ्नो आत्मबल उच्च राखेमा कोरोनालाई जित्न निकै सजिलो हुन्छ।
संक्रमणको दर न्यून वा मध्यम रहँदा हामी हाम्रा श्रोत र साधनबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं । तर, उच्च संक्रमणको दर नेपाल आफैँले मात्र व्यवस्थित गर्न सक्छ भनेर कल्पना गर्नु चाँही यथार्थ बाहिरको कुरा हो ।
कोभिडको पहिलो लहर फैलिएसँगै सरकार र निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य पुर्वाधार, औषधी एवं सामग्री खरिदमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको कुरा नकार्न त सकिँदैन तर यसो भन्दैमा यो प्रर्याप्त छ भन्ने पनि हैन । संक्रमणको दर तीव्र बन्न नपाओस् भन्ने मै हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित हुनुपर्छ।
‘कोरोना नियन्त्रणमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ’
सरकार र जनताले दुवैले अपनाउने कदम नितान्त फरक छन् र दुवै आफैँमा निकै महत्वपूर्ण छन् । एकको आवश्यकताले अर्कालाई निष्प्रभावी बनाउन कदापी सक्दैनन् । राज्यले मुलतः अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले त विशेष गरी नीतिगत प्रवन्ध गर्ने हो ।
राज्यले तोकेका निश्चित स्वास्थ्यका मापदण्ड अनुसरण गर्ने मुख्य दायित्व भनेको जनमानसको हो । दुवैले मिलेर काम नगर्ने हो भने कोरोना नियन्त्रण सम्भब छैन । हो अभिभावक हुनुको नाताले सरकार बढी जिम्मेवार ठहर्छ नै । तर कोरोना अनियन्त्रित हुँदा हामी पनि दोषबाट उम्किन भने सक्दैनौँ । यो यथार्थ हामीले समयमै बुझ्नु जरुरी छ।
विश्वव्यापी कोरोना संकटसँग जुध्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । अझ नेपाल जस्तो श्रोत र साधनको कमीहुने राष्ट्रमा त यो चुनौती विकराल हुने देखिन्छ । तसर्थ,आमजनता र सरकार दुवै मिली यो रोगसँग जुध्नुपर्छ ।
नियमित रुपमा साबुन पानीले हातधुने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, सेनीटाइजरको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने, व्यक्ति व्यक्तिमा कम्तीमा २ मिटरको दुरी कायम गर्ने, सभा सम्मेलनहरू तत्कालका लागि स्थगित गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा आममानिसले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले भने स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने र उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सक्यौँ भने कोरोनाको ‘दोस्रो लहर’लाई हामी पराजित गर्न सक्छौँ।
प्रकाशित मिति: २०७८,बैशाख,८,बुधबार १८:५६